Reno5Series မှာဘယ်လို Features တွေကိုတွေ့လာရမလဲ?? — Anycall Mobile
By liam November 21, 2020 1 Min Read
မကြာသေးခင်က OPPO အနေနဲ့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ သူတို့ရဲ့ Reno5Series အသစ်ထွက်ရှိလာတော့မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ နာမည်ကြီး Leaker တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Digita Chat Station က OPPO Reno5Series ထဲကဖုန်းတွေမှာ သုံးလာမယ့် Chipsets တွေကို Weibo မှာ Shared လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
Digital Chat Station အရ Reno5Series ထဲက ဖုန်းတွေမှာ single punch-hole display design ကိုသုံးပေးလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီ Series ထဲက High-end Model တွေမှာ အခုလက်ရှိ Reno4Pro လို Curved Display ကိုမှ High Refresh Rate ထောက်ပံ့ပေးလာမယ်လို့ Digital Chat Station ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Performance အတွက်တော့ Snapdragon 765G, Dimensity 1000 နဲ့ Snapdragon 865 chipsets တို့ကိုအသီးသီးသုံးပေးလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်ထပ် Digital Chat Station အနေနဲ့ Model နံပါတ် PEGM00 and PDRM00 ရှိတဲ့ OPPO ဖုန်းတွေရဲ့
3C listings ကိုလည်း Shared ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာရင်းထဲ မှာ ဖုန်းတွေမှာ 65W fast charging ထောက်ပံ့ပေးထားမယ့်အကြောင်း ကိုဖော်ပြပေးထာပါတယ်။ ဒီ မှာ Model နံပါတ် PEGM00 ရှိတဲ့ဖုန်းဟာ OPPO Reno5ဖြစ်လာမှာပါ။ သူ့မှာ 6.43-inch AMOLED FHD+ display ၊ SD765G Chip ၊ 12 GB of RAM ၊ 256 GB of storage ၊ 4,300mAh battery ၊ 64-megapixel quad-camera system နဲ့ 32MP Selfie Camera စတဲ့ Specs တွေပါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ Model နံပါတ် PDRM00 ကတော့ Snapdragon 865 Chipset နဲ့ OPPO Reno5Pro ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကဲဒီ Reno5Series မှာဘယ်လို Features တွေကိုမြင်ချင်ကြလဲ?? Comments မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ…
oppoReno5Series